American Airlines si ay ula wadaagto IndiGo duullimaadyada Hindiya
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » American Airlines si ay ula wadaagto IndiGo duullimaadyada Hindiya
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Hindiya • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
American Airlines ayaa adeeg cusub ka bilaabi doonta New York City iyo caasimada India ee Delhi bisha soo socota, iyo inta u dhaxaysa Seattle, WA iyo magaalada Bengaluru horaanta sanadka soo socda.
Shirkadda diyaaradaha ee ugu weyn Hindiya ayaa ku dhawaaqday heshiis codeshare ah oo ay la gashay shirkadda American Airlines oo ku saabsan waddooyinka gudaha.
Wadaagista koodhku waxay u oggolaanaysaa shirkadda diyaaradaha inay kuraas ku iibiso duulimaadka ay wada-hawlgalayaashu ku hawlan yihiin, si ay rakaabka ugu duusho meelaha aanay u adeegin.
American Airlines ayaa bilaabi doonta adeeg cusub oo u dhexeeya New York iyo caasimada India ee Delhi bisha soo socota.
Iyada oo American Airlines ay isku diyaarineyso inay bilowdo adeeg cusub oo u dhexeeya USA iyo India, waxay ku dhawaaqday heshiis wadaagga koodhka shirkadda India ugu weyn ee IndiGo.
Heshiiska codeshare, oo maanta lagu dhawaaqay, ayaa la filayaa inuu bilaabmo bisha Oktoobar, waana la arki doonaa American Airlines'xeerka 29 ee waddooyinka gudaha IndiGo ee Hindiya.
Heshiiska qaybsiga xeerka ayaa u oggolaanaya wadayaasha hawada in ay kuraasta ku iibiyaan duulimaadyada ay ka shaqeeyaan shirkadaha duulimaadyada ee ay wada-shaqayntu leeyihiin, si ay ugu raraan rakaabkooda meelaha aysan u adeegin.
Heshiiska wadaagga koodka IndiGo, oo ah diyaaradda ugu weyn India ee tirada rakaabka ah ee qaadday, oo ay leedahay InterGlobe Aviation, waxay u baahan tahay oggolaansho mas'uuliyiinta dawladda Mareykanka iyo Hindiya, ayay tiri American Airlines.
American Airlines, Inc. waa diyaarad weyn oo Mareykan ah oo xarunteedu tahay Fort Worth, Texas, gudaha Dallas – Fort Worth metroplex. Waa diyaaradda ugu weyn adduunka marka lagu cabiro cabbirka maraakiibta, rakaabka la qorsheeyey la qaado, iyo maylka rakaabka ee dakhliga.
IndiGo waa diyaarad jaban oo Hindi ah oo xarunteedu tahay Gurgaon, Haryana, India. Waa diyaaradda ugu weyn Hindiya ee rakaabka qaada iyo cabbirka maraakiibta, oo leh 59.24% saamiga suuqa gudaha laga bilaabo Ogosto 2020.